Khasaaraha ka dhashey weerarkii ka dhacay dalka Iiraan oo sii kordhay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Sep 23, 2018 260 0
Faafaahin horleh ayaa laga helayaa weerar hubeysan oo maalintii shalay lala eegtay ciidamo katirsan milliteriga dowladda Iiraan oo sameynayay dhoolatus milliteri, kaas oo ka dhacay magaalada Al-axwaaz ee wadankaas.
Khasaaraha ka dhashey weerarka ayaa aad u kordhay, waxaana tirade ay mareysaa dhimashada 29 ruux oo u badan ciidamada dhoolatuska sameynayay, halka dhaawacyadu ay gaarayaan ugu yaraan 60 ruux.
Dowladda Iiraan oo shaacisay in ay gacanta ku dhigtay mid kamid ah ragga weerarka fuliyay ayaa hadda ku dhawaaqday in dhaawac soo gaaray dartii uu u geeriyooday ninka hubeysan ee ay gacanta ku hayeen, taas oo ka dhigeysa in dhamaan raggii weerarka fuliyay ay geeriyoodeen.
Ragga weerarka fuliyay ayaa la sheegay in dhowr maalmood kahor ay hub farabadan ku diyaarsadeen goobta uu dhoolatuska ka dhacay, waxayna kediyeen ciidankii dhoolatuska sameynayay oo mar qur ah ka war helay rasaas kusoo hoobaneysa.
Dowladda Iiraan waxay ku eedeysay laba dowladood oo khaliijka katirsan iney ka dambeeyeen oo ay maalgeliyeen weerarkan, balse ma magacaabin, waxayna ku hanjabtay iney ka bixin doonto jawaab adag.
Dowladaha Turkiga, Faransiiska, Ruushka iyo kuwa kale ayaa cambaareeyay weerarkii Al-ahwaaz, waxayna tacsi u direen dowladda Iiraan.
Magaalada Al-ahwaaz waxaa u badan oo dega muslimiinta carbeed oo Ahlu sunna ah, waxaana dadka ku nool ay ka cabanayaan dhibaatada iyo xadgudubka ay kala kulmaan Rawaafida shiicada ah.